शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडेका थिए ! तर अहिले !!! – Nepal Reports
असार १, एजेन्सी । इजिप्टेलीहरुले रामोसलाई सामाजिक सञ्जालमा सरापे । शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडे लगतै इजिप्टेली ट्वीटरमा अरबिक ह्यासट्याग “रामोस कुकुर” र “र**को छोरा” टे«ण्डिङ्ग भएको थियो । शालाहलाई “भौतिक र मनोवैज्ञानिक चोट” पु¥याएको भन्दै एक इजेप्टेली वकिलले रामोश माथि ८७.४ करोड अमेरिकी डलरको मुद्दानै हालेका छन् ।
इजिप्टले २८ वर्षपछि पहिलो पटक आफ्नो विश्वकप खेल शुक्रबार उरुग्वेविरुद्ध खेलेर शुरु गर्दैछ । शालाह पूर्णत ठीक भए नभएको बारे शंका जारी रहे पनि शालाह खेल्ने निश्चित भइसकेको छ । उनी सहभागी नहुँदा यो निक्कै लज्जाको विषय हुन्थ्यो ।
सन् २०११ मा अरब स्प्रीङ शिखरमा रहँदा मुबारकको पतनसँगै लगभग ३० वर्षदेखि देशलाई जकडिरहेको निरङ्कुशताको अन्त्यले यो दशलाई एक क्षणिक आशा दिएको थियो । तर, लोकतन्त्रतर्फको संक्रमण निक्कै असहज सावित भयो र यो तब असफल भयो जब इजिप्टको पहिलो जन निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सन् २०१३ मा देशको सेनाले अपदस्थ ग¥यो ।